काठमाडौँ– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । आज छापावाल सुन आइतबारको तुलनामा १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९० हजार ६०० रुपैयाँमा कायम भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार तेजावी सुन आज प्रतितोला ९० हजार १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । आज […]
गरिमा र सहारा विकास बैंकले कात्तिक २८ गतेदेखि एकिकृत कारोबार शुरू गर्ने
गरिमा विकास बैंक र सहारा विकास बैंकले कात्तिक २८ गतेदेखि एकिकृत कारोबार शुरु गर्ने भएका छन्। सहारा विकास बैंकलाई गरिमा विकास बैंकले एक्वायर अर्थात प्राप्ति गरेपश्चात सो दिनदेखि गरिमा विकास बैंकको नामबाट एकिकृत कारोबार शुरू गर्न लागेको हो। एक्विजिशनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गते र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कात्तिक ११ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो। गरिमा विकास बैंकको भदौ १५ गते र सहाराको भदौ १२ गते सम्पन्न छुट्टाछुट्टै विशेष साधारण सभाले सो एक्विजिशनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्राप्तिप...
एक सातासम्म किताब जात्रा
काठमाडौँ- हरेक वर्ष ‘किताब यात्रा फाउन्डेसन’ले आयोजना गर्ने ‘किताब जात्रा’ असोज १० गतेदेखि १६ गतेसम्म हुने भएको छ । फाउन्डेसनले बुधबार एक प्रेस नोट जारी गरी यस वर्षको ‘किताब जात्रा’ एक सातासम्म चल्ने जानकारी दिएको हो । ‘यस वर्ष पनि भौतिक रूपमा किताब जात्रा गर्ने योजना कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव अझै कायम रहेकोले सम्भव हुन सकेन’, […]
काठमाडौँ– आज नेपाली बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै चाँदी प्रतितोला १ हजार २०५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताहरुलाई संयमित हुन आग्रह गरेपछि कारोबार रकममा भारी गिरावट आएको छ । बजारमा २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार हुन थालेकोमा बिहीबार करिब ११ अर्बमा मात्र सीमित भएको छ ।बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक भने १.२९ अंकले घटेर २९६८.४३ अंकमा झरेको छ । बोर्डले मंगलबार जोखिमपूर्ण ५१ कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै सचेत […]
मिलेमोतोमा यसरी बेचियो लायन्स क्लब बेलबारीको एम्बुलेन्स
बेलबारी / लायन्स क्लब बेलबारीको नाममा ७ बर्षअघि बेलबारीमा आएको एम्बुलेन्स क्लबकै पुर्वपदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा बिक्री भएको खुलासा भएको छ ।राजश्व छुटसहित बेलबारीका जनताको सुबिधाका लागि भन्दै ल्याईएको एम्बुलेन्स अचानक गायब भएपछि खोजी गर्ने क्रममा बिक्री भएको प्रमाणसहित फेला परेको छ । लायन्स क्लबले बेलबारीमा सन २०११ मा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको र बि.स २०७० बैशाख ३... The post मिलेमोतोमा यसरी बेचियो लायन्स क्लब बेलबारीको एम्बुलेन्स appeared first on Purbeli News.
सुत्केरी बोकेको एम्बुलेन्स र अटो ठोकिँदा दुईको निधन
झापाको दमकमा आज बिहान सुत्केरी बोकेको एम्बुलेन्स र अटो ठोकिँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ।